2011 | ပျူနိုင်ငံ
(ပြည်တွင်းမှာ ပြသခွင့်မရသေးတဲ့ အင်းလေးကန်ရဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကား
ပါ၊ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးဇာတ်ကားတွေကို `တိမ်တွေသွားတဲ့လမ်း´
မှာကတည်းက စပြီး သတိထားမိပါတယ်၊ အရမ်းကောင်းတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
Posted by ကိုအောင် at 22:507comments
ဒေါက်တာသန်းထွန်း အထိမ်းအမှတ်/ သမိုင်းပဟေဠိ အဖြေညှိ အထူးအစီအစဉ်
သမိုင်းပညာရှင် ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း ကွယ်လွန်ခြင်း
(၆)နှစ်ပြည့် ဖြစ်သော နိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့ အထိမ်းအမှတ်
အဖြစ် `သမိုင်းပဟေဠိ အဖြေညှိ´ အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် သမိုင်း
ဆိုင်ရာ ရှားပါးဓါတ်ပုံများကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။
(၁၂)ဤဓါတ်ပုံထဲတွင် ကြိုးစင်သို့ တင်ရန်အတွက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
ခြင်း ခံလာရသောသူသည် မည်သူ ဖြစ်ပါသနည်း ?
(၁၃)ဤဓါတ်ပုံထဲက နှစ်ဦးသည် မည်သူတို့ ဖြစ်ပါသနည်း ?
(၁၄)ဤဓါတ်ပုံထဲက မိဘနှစ်ပါးသည် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦး
၏မိဘများဖြစ်ပါသည်၊ မည်သူ၏ မိဘများ ဖြစ်ပါသလဲ ?
(၁၅)ဤကြေးရုပ် ရုပ်တုသည် မည်သူ့ကို ဂုဏ်ပြုထားသော ကြေးရုပ်
ရုပ်တု ဖြစ်ပါသနည်း ?
(၁၆)ဤရုပ်တုသည် ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အချမ်းသာဆုံး
ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦး၏ ရုပ်တုဖြစ်ပါသည်၊ မည်သူ ဖြစ်ပါသနည်း ?
(၁၇)ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည် ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာလူမျိုး
များထဲ၌ ပထမဆုံး ဘုရင်ခံ ဖြစ်ခွင့်ရသူ ဖြစ်ပါသည်၊ မည်သူ
(၁၈)ဤဓါတ်ပုံထဲက ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည် သမ္မတဖြစ်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါ
သည်၊ မည်သူ ဖြစ်ပါသနည်း ?
(၁၉)ဤဓါတ်ပုံထဲက စစ်ဝတ်စုံဖြင့် တရုတ်ကြီးသည် (၁၉.၀၄.၁၉၄၂)
နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ မေမြို့သို့ အလည်ရောက်ခဲ့သော တရုတ်
ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်၊ မည်သူ ဖြစ်ပါသနည်း ?
`သမိုင်းပဟေဠိ အဖြေညှိ(၂)´၏ အဖြေများမှာ …
Posted by ကိုအောင် at 16:243comments
Posted by ကိုအောင် at 19:285comments
(၁)ဓါတ်ပုံထဲတွင် ကြိုးပေးခံရသူ၏ အမည်ကို သိပါသလား?
(၂)မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူး
သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခွက်ခွက်လန်
အောင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးသည်၊ ပထမ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
မတိုင်ခင် သမိုင်းဝင် အဖွဲ့ကြီးတစ်ခု၏ ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး
ဒုတိယ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း လူသိများသော
နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမှ ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို
ယင်းတို့၏ အမည်ကို သိပါသလား ?
(၃)ယင်းမော်တော်ကား၏ ပိုင်ရှင်ကို သိပါသလား ?
(၄)ဤနေရာသည် မည်သည့်နေရာ ဖြစ်ပါသနည်း ?
(၅)ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီးဦးကာ
သည် မည်သည့်ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ
ဖြစ်ပါသနည်း၊ ဆရာကြီးဦးကာ တာဝန်ယူစဉ် ထင်ရှားသော
သမိုင်းဝင် အဖြစ်အပျက်ကို သိပါသလား ?
Posted by ကိုအောင် at 02:047comments
Posted by ကိုအောင် at 21:26 11 comments